China Runjin © Krunt ™ -4000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta Ngwaọrụ na Nrụpụta Ihe | Runchen
Runjin © Krunt ™ -4000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta
Tinye granule mkpụrụ osisi a mịrị amị, granule granule ma ọ bụ granule mmiri n'ime ice cream. (Akụrụngwa anaghị adabara maka ihe ndị nwere viscous, yana ndị na-adọrọ mmiri ngwa ngwa ma ọ bụ dị mfe itinye obi ha)
The moto eme ka quantitative ịghasa ibuga nsogbu dị iche iche. Na-agbakwunye granule n'ime ice cream nke ọma na stably site na vane pump, wee gwakọta granule na ice cream slurry site na onye na-arụ ihe n'ime igwe n'okpuru ọsọ mgbe niile .Vane nri mgbapụta na-agbanwe site na potentiometer.
MkpụrụNwachukwu-4000 bụ onye na-eri mkpụrụ osisi granule ma nwee ike izute mkpa nke ịdị ọcha nri .A na-eme akụrụngwa nke akụkụ dị elu yana atụmatụ ya nwere ike izute ụkpụrụ ịdị ọcha, ntụkwasị obi na ogologo oge. All akụkụ nke ga-akpọtụrụ ice ude granule ka si 304 igwe anaghị agba nchara .E nwere casters arụnyere na akụrụngwa ụkwụ, nke nwere ike mfe ịkwaga na ịwụnye.
Hopper Ma ọnụ iko
Iji hụ na ọnụọgụ ọnụọgụ nwere ike ịzụ granule siri ike, a na-etinye ngwaọrụ agwakọta na hopper .Quantitative ịghasa na-ebugharị nsogbu dị iche iche iji banye na mgbapụta nke vane feeder pump. ọsọ nke quantitative ịghasa nwere ike gbanwee si 0% ka 100%.
Vane Nri mgbapụta
Vane nri mgbapụta mejupụtara nke mbanye wiil nke agụba. Ọ nwere ike ịgwakọta granulu dị iche iche na ice cream slurry site na igwe na-aga n'ihu na-aga n'ihu .Ọganihu nke ntụgharị vane nwere ike mechie ụzọ mpempe mkpụrụ osisi, nke nwere ike ikewapụ ice cream slurry na ikuku. ọ ga-alaghachi iji ụgbọala na-akpaghị aka na-etinye ice cream slurry ala. Enwere ike ịme usoro a nwere ike ịgba ọsọ maka ọsọ ọsọ nke wiilị na-agba ọsọ site na ike
Igwekota dị na vane mgbapụta tinyekwa. Ọ nwere ike ịgwakọta ice cream slurry na mkpụrụ osisi mkpụrụ ndụ karịa edo site na ọsọ mgbe niile.
Ọrụ Mkpụrụ inggwakọta
Ogwe Ọrụ Bọtịnụ niile na-arụ ọrụ dị n'ihu panel, ọ dịkwa mfe ịrụ ọrụ.
Ọ ga-ejikwara ozugbo mgbe ike ọkọnọ .Ọ bụ nnọọ adaba.
CIP nhicha n'ịntanetị
Usoro nhicha CIP nwere ike ịmalite site na ịchịkwa ngalaba ọrụ, nke nwere ike idozi ohere n'etiti mgbapụta feeder na agwakọta akụkụ dị ka ebe dị anya.Ya mere na ọ ga-adaba adaba wepu ngwakọta akụkụ na ịghasa ọnụọgụ, iji mee nhicha aka.
Ike Mkpụrụ Ike
Mkpụrụ TM-4000 nwere ike ịmepụta 16 ~ 400L / Hour nke ọ bụla site na itinye nkedo dị iche iche.
l quantitative ịghasa
l ndị ọzọ akụkụ ahụ mapụtara
ihe Oke Kwuru
Nri ịghasa moto 0,75 KW
Hopper inggwakọta Motor 0,75 KW
Motorgwakọta Motor 0,75 KW
Vane mgbapụta Motor 1.1 KW
Ihe ntụgharị 0,15 KW
Ike niile 2.75 KW
Nri tube ， externally 51 mm 2 "sooks mwekota
Igbapụta tube tern externally 51 mm 2 "sooks mwekota
Nke gara aga: Tank Runet Jacketed
Osote: Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Na-ejuputa igwe
Runjin © Krunt ™ -2000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta
Isi okwu B, Isi okwu A,